Italian Real ala na ụlọ na-ekwu,
Ike 10, 2013 na 5:37 obi
M enyocha igbe "kwe ka kwalite iji zuru version" ke ntọala ma apụghị ịhụ ebe m Lelee maka upgrades na ebi kwalite,
Ị nwere ike ịkọwa
Ike 10, 2013 na 7:22 obi
Ke WordPress sidemenu, e nwere “dashboard” sotere “mmelite”
Ike 10, 2013 na 8:26 obi
ekele, na anya ka ọ rụọ ọrụ.
Ike 23, 2013 na 7:08 obi
a ga na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na m na-eji n'ikuku ana enweta n'otutu ebe nrụọrụ?
M clicked Mmelite ke kiet ke otu saịtị ma ọ bụ na-egosi elu m na netwọk ha?
Ike 24, 2013 na 7:50 na
Ke nwalee ya, kwesịrị na-arụ ọrụ.
Kasị njọ ikpe, download na ngwa mgbakwunye faịlụ site ebe a ma melite na ojiaka.
June 20, 2013 na 2:21 obi
Hi ọtụtụ ekele na-arụ ọrụ na multi saịtị 🙂
Ike 24, 2013 na 10:00 na
Ya mere,, Ntak emi update m nnọọ mere, igbu ọkọlọtọ ke akpa ebe?
Aghọtaghị m. Gịnị mere m ga nwere download a ngwa mgbakwunye gị website ugbu a,, nke kwesŽrŽ na-arụ ọrụ site n'aka WordPress repository?
Coudl ị na-aza ya mere na ị na-ese ndị a?
Ike 26, 2013 na 12:10 na
Ọfọn, M na-atụ aro na-agụ ihe a na aga na post, M ese na onye ọ bụla na-eme ihe ọ bụla, i nwere ike iwunye ọ bụla ị chọrọ ebe mgbe ị na-achọ.
June 12, 2013 na 1:19 na
M soro nkuzi ma ka na-adịghị ahụ ihe ọ bụla na-abịa ọkọlọtọ n'elu… Nyere! 🙁
June 12, 2013 na 1:57 na
Hapụzie – dị nnọọ dozie ya. Amama si na ị ga-aga azụ n'ime kpọmkwem wijetị na họrọ ọkọlọtọ nhọrọ mgbe emelite. Daalụ!
November 22, 2016 na 11:07 na
ekele nwoke, gị zara nyeere m aka. Ee, mgbe emelite, ị ga-aga azụ ka Dashboard>ọdịdị>Wijetị, mgbe ahụ ị ga-ahụ ọtụtụ nhọrọ maka flags na-egosipụta.
ekele na ịhụnanya si Switzerland.
June 27, 2013 na 11:55 obi
laghachi gaa kpọmkwem wijetị??? Ma ebe?
Na arụnyere ikpeazụ version nke Transposh ngwa mgbakwunye…9.3!
M soro video aka… ma m nwere ike ịhụ ebe ọkọlọtọ nhọrọ bụ.
-Amasị m iji ọkọlọtọ kama Og ederede(aha asụsụ).
Olee otú m nwere ike ịtọ ọkọlọtọ dị ka ndabere ? Ebee nri nhọrọ ịtọ??
Daalụ ke advace – Ciro
June 28, 2013 na 12:08 na
Dị imelite ihe n'uju version.
June 28, 2013 na 2:26 obi
M mere ya! Edi ke nhazi page nke ngwa mgbakwunye ọ dịghị ụzọ ọ bụla na-ahọrọ ọkọlọtọ kama “bekee” – “Ro” wdg (aha asụsụ).
Ebee bụ bọtịnụ ịhọrọ ọkọlọtọ?
M na-eji wordpress3.5.1
June 28, 2013 na 10:21 obi
Mgbe ị na-ahọrọ wijetị i nwere ike ịgbanwe ya ịke, nke a abụghị na ngwa mgbakwunye nhọrọ ma kpọmkwem wijetị mputa, n'otu ebe i nwere ike ịgbanwe ya na aha, wdg.
June 28, 2013 na 10:50 obi
Daalụ… na ọ bụ nke zuru okè!
Ahụbeghị m selector ke ngwaọrụ ebe.
August 13, 2013 na 10:26 na
M nnọọ emelitere ka WordPress 3.6 na interface nke na ihuenyo translation agbanweela kpamkpam. Ma nke kasị njọ bụ na enweghị m ike iyi ka ọ bụla ederede nke ederede a sụgharịrị. M mere update Transposh ndị ọhụrụ version m mere “Ekwe ka kwalite ka zuru version” nke mere-arụ ọrụ ezi. Biko mee ka m maara ihe na-eme iji na-na na ihuenyo translation ọrụ (na oroma na-acha akwụkwọ ndụ obere igbe na pịa :). Daalụ!
August 13, 2013 na 1:41 obi
August 14, 2013 na 12:15 obi
Ndewo, M arụnyere na ngwa mgbakwunye ọ na-arụ ọrụ ahụ n'ụzọ zuru okè Transposh. Nsogbu abịa mgbe m na-aga ka nka m pịa otu foto na enlarge na window na na-egosi na-akpali ala oge ọ bụla m na-enye ndị na-esonụ oyiyi na-akpụ akpụ karia ma, ukwu ata na inelegant. Tupu wụnye Transposh foto na egosipute na a popup window ma ọ bụghị ịga na ụlọ ịkwaga ọzọ foto. Eche m na ọ uche ụfọdụ incompatibility na ngwa mgbakwunye WP igbe ọkụ 2. Olee otú m nwere ike idozi nsogbu a? Daalụ!
August 14, 2013 na 2:13 obi
Ike-enyere ma gị nye URL ebe nsogbu ahụ dị anya
August 14, 2013 na 2:31 obi
August 14, 2013 na 2:34 obi
Ndewo, bụ ama anya ọdịnaya URL. Daalụ.
August 14, 2013 na 2:12 obi
M na-enweghị ike si ele Flag ọbụna mgbe emelite ihe ngwa mgbakwunye ka kacha ọhụrụ na version. Nwere ike ị na-enyere m aka idozi ya ..?
August 14, 2013 na 2:14 obi
Jide n'aka gị ịtọ kwesịrị ekwesị wijetị ẹbọ ke idem / wijetị submenu
August 14, 2013 na 2:17 obi
Daalụ tupu ...
Ndi ofu ya.. Tupu emelite m dint hụrụ selector ke wijetị.. Ekele ndị… Egwu ngwa mgbakwunye… Daalụ a otutu
August 17, 2013 na 9:29 na
My website ugbu Hebrew (ikike n'aka ekpe asụsụ) m ga-amasị ka ịgbakwunye US Bekee nke ọma. Nsogbu bụ na mgbe m ebudatara na plọg ke, m dum WordPress akara panel kpaliri site na Hibru Bekee, na na website gbanwere ọdịdị (dum website ọkọdọ kwekọọ n'aka ekpe). N'ihi ya, m suke na nkwarụ ndị plọg ke. M na ọhụrụ na WordPress na hoo haa, m abụchaghị n'aka na ihe m na-eme otú ahụ m chere ihe ndị m na nhọrọ? M hụrụ ụfọdụ Nkuzi ebe asụsụ kwukwara nile ekpe gaa n'aka nri omume, ma ọ dịghị ihe mere ha…
Biko nyere m aka! 🙂
Daalụ nke ukwuu tupu,
August 17, 2013 na 11:09 na
Ihe ị na-ịhụ bụ n'ihi na Transposh okpụhọde ke locale dị ka asụsụ,
Ndozi a, biko enịm Hebrew dịka ndabara asụsụ ke Transposh ma ọ bụ gbanyụọ na locale mwekota atụmatụ ntọala,
Cheta hitchhiker ji ndu na cover.
Paul Thomson na-ekwu,
August 19, 2013 na 2:55 obi
Gịnị mere na ị pụọ WordPress repository? Ị na-achọ n'Aka a backlink gị website ma ọ bụ nke a bụ ịnara / ugwo ùgwù?
August 19, 2013 na 10:59 obi
Ahapụrụ n'ihi na m nwere ike agaghịkwa obi ya,
Ọ dịghị mgbe ọ chọrọ, ka ọ na-abụghị chọrọ, ịpụ apụ na nke. pụọ na- (ma ọ bụ koodu ya)
August 20, 2013 na 10:31 na
Ndewo ọzọ, M dere, ụbọchị ole na ole gara aga, ma ọ dịghị aza, ma. Biko, onye ọ bụla mara otú m nwere ike idozi ihe incompatibility site m Transposh WP ngwa mgbakwunye na Lightbox2? Mgbe ị na-emeghe otu foto ga-emepe windo ozugbo vanishes, ịhụ ka ị na-aga na ala nke na peeji nke. Nke a na eme oge ọ bụla m na-enye aka ịhụ na-esote foto, esiwanye na-akpali n'okpuru. Gịnị nwere ike na-eme? M ọhụrụ a na m ike na-eche ihe nwere ike njehie.
Nke a na eme ka m nwere ngwa mgbakwunye nyeere Transposh, mgbe ị na gbanyụọ photos anya zuru oke.
Ọzọ ajụjụ m nwere bụ na galari ndị Bekee na Catalan.
Iyi ọtụtụ ụbọchị a na m na-aga mebiri. Biko, onye na-enyere m?
September 5, 2013 na 10:44 obi
Akpa, na-ekele gị maka oké ọrụ gị mere ka ike nke a ngwa mgbakwunye.
M nwere obere arịrịọ : otú m nwere ike tinye ná mmalite nke ọ bụla n'ime osisi na-anọ n'ụlọ mkpọrọ ahụ a sụgharịrị ịbụ asụsụ ?
Ga-amasị m aka na-agụ akwụkwọ na-esonụ ederede a sụgharịrị site google ma ọ bụ na Bing ma ọ bụ ….
September 5, 2013 na 10:58 obi
Lee shortcodes (na http://trac.transposh.org) ma jiri not_in koodu, jide n'aka na ị na ntụgharị na ndabara asụsụ nyeere.
September 6, 2013 na 10:12 na
wahou wahou ! Na-arụ ọrụ n'ezie akwa !
October 31, 2013 na 10:45 na
M gbalịrị mmelite na zuru gị ntụziaka. Ma, enweghị m ike na update igosi elu niile. Ndi clicked “Kwe Ka upgrading iji zuru version” na-azoputa, ma ọ dịghị update showes elu. Nwere 0.9.3 version. Odomo egbu osisi ma si, chere ụbọchị awa. Clicked na oyi na na. Ọ dịghị update. Achọrọ m nke ọkọlọtọ na-arụ ọrụ! Nakwa nsụgharị agaghịkwa na-arụ ọrụ o yiri ka…
October 31, 2013 na 11:05 na
E nwere otu nsogbu WordPress 3.7, kpatara mgbanwe nke update URL nke na-adịghị triggering Mmelite usoro,
E nwere mmadụ abụọ agbanwe agbanwe:
1. a version 0.9.4 a ga-tọhapụrụ na wordpress.org nke ga-nd-enyere ndị update
2. aka download faịlụ site na ebe a na ebi update
October 31, 2013 na 11:07 na
mma. Daalụ! Echere m mebiri ma ọ bụ smt! 😉
Echiche ọ bụla mgbe?
October 31, 2013 na 11:08 na
Ozugbo o kwere omume (mkpa igosi ụfọdụ nlele tupu ahapụ)
October 31, 2013 na 11:10 na
Ọ Dị Mma. Jụụ. Na ekele maka ihe niile gị na-arụ ọrụ a! Na-enyere aka nke ukwuu iji mee ka ọ na-adị mfe n'ihi na m na-ebipụta ma na ndị ọzọ aka ịghọta ihe!
December 10, 2013 na 10:06 na
M na-egbu oge ime kwalite a version n'ihi na m chere na m ga-hapụ nile ọkọlọtọ ma ọ bụ ịbụ ndị ike ịhọrọ ihe asụsụ… Nso nzuzu m! Dị ka ọtụtụ n'ime plugins ọrụ, M kweere na anyị dị wanna inwe ihe free nakwa na mgbe na-arụ ọrụ. Na na congrats transposh maka oké ọrụ na-eme ka m na-akwụsị ma chee echiche otú inye ya otu ụbọchị.
December 12, 2013 na 6:39 obi
ekele maka ụdị okwu